Waa tee Kooxda uu dalabka ka helay Kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos? – Gool FM
Haaruun March 15, 2020
(Madrid) 15 Mar 2020. Kabtanka Kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa la soo warinayaa inuu dalab cusub ka helay koox ka dhisan qaaradda Yurub.
Sida wararku ay sheegayaan Daafaca Kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa dalab ka helay naadiga reer France ee Paris Saint-Germain.
Kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa la soo sheegayaa inuu dalabkan ka helay Kooxda Paris Saint-Germain si uu bedel ugu noqdo kabtankooda Thiago Silva.
Ramos waxa uu nafsaddiisa ka dhigay mid ka mid ah daafacyada ugu fiican adduunka waqtigiisa Real Madrid, isagoo kula guuleystay kooxda reer Spain afar horyaalka La Liga ah iyo afar Champions League kaddib markii uu sanadkii 2005 uga soo biiray kooxda Sevilla.
Si kastaba xaalku ha noqdee, Warsidaha Don Balon ayaa warinaya in ka tagista garoonka Bernabeu ee 33-sano jirkaan ay dhowaan soo gabagabeyn doonto kooxda reer France, iyadoo Naadiga uu hoggaamiyo macallin Thomas Tuchel ay dooneyso inay ku soo darto safkeeda daafacan khibrada leh ee reer Spain.
Warbixinta ayaa sidoo kale soo jeedinaysa in haddii Ramos uu soo afjaro xiisaha uu u qabo sii joogista Real Madrid, kooxda Zinedine Zidane ay u aragto bedelkiisa daafaca Bayern Munich ee David Alaba, iyadoo xiddigan reer Austria uu awood u leeyahay inuu ka ciyaaro daafaca dhexe ama garabka daafaca bidix.
27-sano jirkaan ayaa sida la sheegayo waxa uu Los Blancos ugu kacayaa adduun dhan 65 milyan oo euro oo u dhiganta 59 milyan oo gini, si kastaba ha ahaatee waxaa horey loola xiriirinayay inuu u wareegayo kooxda Chelsea.
Ramos ayaa 640 kulan u saftay kooxda Real Madrid tartammada oo dhan, waxaana uu wakhtigaas u dhaliyey 91 gool.
Xaaska Mikel Arteta oo soo hadashay kaddib markii macallinka Kooxda Arsenal uu haleelay xanuunka Coronavirus